Vaovao momba ny iPhone | IPhone News (Pejy 6)
Podcast 11 × 45: Saron-tava sy kara-tarehy
Saingy manana azy ireo ho Face ID izahay izao satria tsy maintsy mitondra ny saron-tava na aiza na aiza. Inona no tokony hataon'i Apple? Hiverina amin'ny Touch ID ve isika?
Apple mikendry headphone conduction taolana
Araka ny patanty iray vao haingana, ny orinasa Cupertino dia miasa amin'ny headphone conduction taolana, amin'ny antony inona?
Ny fampiharana Amazon Alexa dia mandefa endrika vaovao
Ny kinova vaovao an'ny fampiharana Amazon Alexa dia mitondra menio vaovao manana ny lazany bebe kokoa amin'ny filalaovana atiny sy ny fanaingoan'ny mpampiasa azy.
IOS 3 beta 14 dia manamarina ny iPhone 12-inch andrasana
Ny beta 3 an'ny iOS 14 dia nanoro hevitra ny fahatongavan'ny iPhone 12 5.4 vaovao vaovao noho ny fiovana nosedraina ny safidy Zoom Display.
Apple Maps dia mandefa tolo-kevitra hijanona ao an-trano raha efa nankany amin'ny seranam-piara-manidina ianao
Raha nitsidika seranam-piara-manidina amerikana ianao dia hahazo fampandrenesana avy amin'ny Apple Maps milaza fa mijanona ao an-trano mandritra ny 14 andro amin'ny COVID-19 ianao.
Isan'andro - Ny majika an'ny AirPods sy ny olany lehibe
Miaraka amin'ny iOS 14 Apple dia manavao ny majika an'ny AirPod miaraka amina fiasa vaovao saingy mbola mitazona ny fihenany lehibe: ny bateria.
Eve ho an'ny Homekit dia ahitana làlana hitsin-dàlana hijerena ny ora sy hampiatoana ny rano
Ny app Eve vaovao ho an'ny Homekit dia misy làlana hitsinjo ny toetr'andro ary hanafoana ho azy ny fanondrahana an'i Eve Aqua.
Nampandresy ireo mpandresy loka iPhone faha-telo ambin'ny folo
IPPAWARDS dia nanambara ireo mpandresy amin'ny sokajy rehetra amin'ny andiany faha-13 amin'ny iPhone Photography Awards amin'ny tranokalan'ny ofisialiny.
Ireo ny vaovaon'ny iOS 14 Beta 3
Lazainay aminao ny fiovana lehibe amin'ny beta 3 an'ny iOS 14, widgets vaovao, fanovana sary masina ary fanjavonan'ny 3D Touch.
Ireo mpamatsy Apple rehetra dia hijanona tsy hampiasa arintany intsony amin'ny 2030
Ny drafitra ambongadin'i Apple ho an'ny 2030 dia midika fa ny vokatra rehetra dia tsy manome fiantraikany maloto amin'ny atmosfera.
Spotify mandefa podcast video hifaninana amin'ny YouTube
Ny podcast video ao amin'ny Spotify dia efa misy ofisialy izao, na dia amin'izao fotoana izao aza, tsy misy ny amin'ny Espaniôla, io no dingana voalohany hijoroana amin'ny YouTube
Apple hankalaza ny Andron'ny fanatanjahantena nasionaly any Shina miaraka amina fanamby vaovao ho an'ny Apple Watch
Apple dia nandefa ny loka sy ny mari-pamantarana vaovao natokana manokana ho an'ny Fetim-pirenena ho an'ny fanatanjahantena any Shina amin'ny 8 Aogositra.
Ny Fanjakana Mitambatra dia manomboka manery amin'ny fahefan'ny Fifaninanana misy ifandraisany amin'ny fifanarahan'i Google mba ho motera fikarohana ho an'ny iOS
Mpamatsy Apple voampanga ho nandika ny zon'olombelona
Ny departemantan'ny varotra amerikana dia nanampy orinasa sinoa 11 vaovao voarohirohy ho nandika ny zon'olombelona, ​​ny iray amin'izy ireo dia miasa ho an'i Apple
Ny iPadOS 15 hevitra voalohany dia mampiseho ny fomba hijeren'ireo Widgets ny efijery iPad
Ny hevitra voalohany amin'ny iPadOS 15 dia navoaka izay ahitantsika ny dinamikan'ireo widget miaraka amin'ny fanavaozana ny Home izay tsy hitantsika tao amin'ny iPadOS 14.
Ny iPhone SE 2020 dia nanohana ny fivarotana an'i Apple tamin'ny telovolana faharoa
Raha tsy nisy ny famoahana iPhone SE 2020, dia nidina lavitra kokoa ny varotra Apple nandritra ny telovolana faha-2020.
Apple dia manome voninahitra ao amin'ny tranonkalany ho an'ny Kongresy John Lewis efa nodimandry
Nanapa-kevitra i Apple fa hanome voninahitra ny Kaongresy John Lewis ao amin'ny tranokalan-tranonkala lehibe amin'ity faran'ny herinandro ity. Nodimandry tamin'ny 17 Jolay 2020 izy.
Manomboka manome hazavana ny hack hack ao amin'ny Twitter: kaonty 130 no notafihana
Ny fiantraikan'ny hack hack an'ny Twitter ary hananany no lakilen'ny fananganana ny fiarovana ny tambajotra sosialy mandritra ny volana ho avy.
Pegatron dia hanana orinasa any India hanamboatra ny iPhone
Pegatron dia mety manana orinasa mpamokatra vokatra ho an'ny Apple any India ihany koa araka ny tatitra farany natolotry ny mpampita vaovao Bloomberg.
Ny EU dia hanadihady an'i Siri, Alexa ary Google Assistant
Ny andrim-panjakana mifehy ny fifaninanana ao amin'ny Vondrona eropeana dia nanao fanadihadiana momba ireo mpanampy virtoaly samihafa. Siri, ...
Isan'andro - Seranam-piaramanidina Apple tsy hita
Roa taona mahery izay no nandefasan'ny Apple ny router ny AirPort. Tsy misy ny tsaho momba ny vokatra vaovao ho ...
Twitter dia nijaly tamin'ny fanapahana kaonty voamarina faobe
Ny Twitter dia niharan'ny fanafihana goavambe tamin'ny kaonty voamarina tamin'ny tanjon'ny fanangonana bitcoins mitentina 100.000 XNUMX $.
Tom Hanks 'Greyhound no laharana voalohany amin'ny Apple TV + premiere voalohany
Toa ny Greyhound premiere no anisan'ny malaza indrindra hatramin'ny nanombohan'ny Apple ny serivisy Apple TV +.
Ny fakan-tsary Eufy Indoor Cam dia nohavaozina mba hifanaraka amin'ny HomeKit
Eny an-tsena dia azontsika atao ny mampiasa fakantsary fiarovana marobe, fakantsary fiarovana izay ...
Apple dia mbola nikaroka ny fomba hanatsarana ny router alohan'ny nandaozany azy ireo
Nahagaga ny maro ny fandaozana ireo mpitily Apple. Ny tobin'ny AirPort amin'ny maodelin'izy ireo dia ...
Misy izao ny tranofiara ho an'ny 'Ted Lasso', andiany vaovao an'ny Apple TV +
Apple dia namoaka ny tranofiara voalohany ho an'ny Ted Lasso comeda vaovao, izay hanombohana eran'izao tontolo izao amin'ny 14 Aogositra ao amin'ny Apple TV +.
Ny tariby Lightning to USB-C izay hampidirina ao anaty boaty miaraka amin'ny iPhone 12 dia hokarakaraina
Ora vitsy lasa izay, tafaporitsaka izay mety ho tariby iPhone 12 misy famolavolana mirandrana matevina kokoa sy USB-C mankany amin'ny tselatra.
Podcast 11 × 44: Charger, bateria ary tariby
Amin'ity herinandro ity isika dia miresaka momba ny batterin'ny iPhone manaraka, na hampiditra charger na tsia, ary ny tariby izay mety ho tafiditra ao anaty boaty.
Apple dia afaka manomboka amin'ny taona sisa, fampiharana vaovao ho an'ny Windows 10 miaraka amin'ny fidirana amin'ny Apple Music sy Apple TV +
Parody video Apple amin'ny telecommuting
Apple dia mandefa horonantsary vaovao amin'ny alàlan'ny fandefasana telefaona avy any an-trano amin'ny endrika vazivazy ho tena mpilalao fototra.
Apple dia namoaka horonantsary mahatsikaiky iray momba ny fomba mora hampiasana ao an-trano
Ny horonantsary farany navoakan'i Apple tao amin'ny fantsona YouTube dia mampiseho amintsika fa mora ny miasa any an-trano miaraka amin'ireo vokatra Apple.
Ireo no zava-baovao ateraky ny asan'ny Magnifier ao amin'ny iOS 14
Lupa dia safidy azo idirana izay niova tao amin'ny iOS sy iPadOS 14 nanampy fampiasa vaovao ary nahazo endrika fan interface ho an'ny interface-ny.
Apple dia nifanaraka tamin'ny orinasam-pamokarana Idris Elba hamorona atiny voalohany ho an'ny Apple TV +
Ny orinasam-pamokarana mpilalao sarimihetsika anglisy Idris Elba dia nanao fifanarahana tamin'ny Apple TV + hamorona atiny vaovao amin'ny andiany sy amin'ny sarimihetsika.
Ny hoavin'ny fampiharana Search ao amin'ny rafitra fiasa vaovao an'ny Apple
Ny fampiharana Search dia ahafahanao mampiditra vokatra avy amin'ireo orinasa antoko fahatelo ary hampiasan'izy ireo amin'ny alàlan'ny fomba ofisialy ny tambajotran'ny Find My Apple.
Ao Cupertino dia manosika an'i Foxconn hanamboatra any India izy ireo
Foxconn dia mampiasa vola any amin'ny ozininy any India hanamboarana ny iPhone. Toa manintona azy i Apple
Araka ny tsaho farany, ny iPhone 12 Pro dia hotantanan'ny RAM 6 GB
Ny tsaho farany mifandraika amin'ny RAM an'ny iPhone 12 vaovao dia manondro fa ny kinova Pro dia hotantanan'ny RAM 6 GB.
Notsipihan'i Apple fa fampiharana kely ny widgets ao amin'ny iOS 14
Ny widgets iOS sy iPadOS 14 dia hanome fanohanana mamokatra ho an'ny mpampiasa. Saingy nomarihin'i Apple mazava fa tsy fampiharana kely akory izy ireo aorian'ny fialantsiny.
AirPods maimaim-poana miaraka amin'ny "Back to School" an'i Apple
Ankehitriny Apple dia hanome AirPods sasany miaraka amin'ny fampiroboroboana ho an'ny mpianatra, safidy tsy mampino izay azo antoka fa handeha tsara.
Apple manitatra ny programa fanamboarana any ivelan'i Etazonia
Ny programa fanamboarana magazay an'ny antoko fahatelo an'ny Apple izao dia ofisialy ivelan'ny Etazonia, tonga hatrany Kanada sy Eropa
Fanalahidy fitaratra ho an'ny Mac?
Apple dia mahazo patanty mifandraika amin'ny lakile fitaratra. Azonao atao ve ny mampiasa ity fitaovana ity hamoronana fitendry?
Apple Pay dia afaka mamela ny fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny kaody QR amin'ny ho avy
Apple dia afaka namela ny fandoavam-bola tamin'ny alàlan'ny Apple Pay tamin'ny alàlan'ny fampifantohana fotsiny ny fakantsarin'ny iPhone amin'ny kaody QR na famokarana izany avy amin'ny fitaovantsika.
Ny vaovao rehetra ao amin'ny iOS 14 Beta 2
Asehontsika ny vaovao rehetra fa ny beta faharoa an'ny iOS 14 dia misy, toy ny kisary vaovao, widgets vaovao ary fiasa vaovao
Inona no vaovao amin'ny watchOS 7 amin'ny horonan-tsary
Nasehonay tamin'ity horonantsary ity ny vaovao lehibe fa ny beta voalohany amin'ny watchOS 7 dia mitondra antsika any amin'ny Apple Watch. Misy aorian'ny fahavaratra.
Fivoahana bebe kokoa milaza ny iPhone 12 tsy misy charger
Mitohy ny fitsofohan'ny tsaho sy ny fivoahana ary samy manondro ny toerana itodihany ny tsirairay avy: a ...
Apple paripe miaraka amin'ny lalàna vaovao momba ny fiarovam-pirenena ao Hong Kong
Araka ny voalazan'i Bloomberg, Apple dia manombatombana ny fiantraikan'ny lalàna vaovao momba ny fiarovana nasionaly nankatoavina tany Hong Kong ary napetrak'i Shina izany.
Nilaza i Tom Hanks fa malahelo izy amin'ny première Greyhound ao amin'ny Apple TV +
Ilay mpilalao sarimihetsika malaza sy nahazo loka Tom Hanks dia nilaza fa tsy faly amin'ny premiere Greyhound ao amin'ny serivisy streaming an'i Apple izy.
WhatsApp sy Telegram dia tsy hamaly ny fangatahana angona data avy amin'ny manampahefana Hong Kong
Ny rindranasan-kafatra hafatra lehibe indrindra dia efa nanambara fa tsy hiara-hiasa amin'ny fangatahana fampahalalana voarain'izy ireo avy any Hong Kong izy ireo
Ireo ny vaovaon'ny HealthKit ao amin'ny iOS 14
Ny vaovao momba ny HealthKit dia mihodina amin'ny fisokafan'ny ECG amin'ny fampiharana an'ny antoko fahatelo, ny soritr'aretina vaovao ary ny fivezivezena vaovao amin'ny Apple Watch.
Ny filohan'ny mpiara-miasa amin'ny fahitalavitra Sony Pictures dia miditra amin'ny Apple TV +
Sony-Tele Television Co-chairman Chris Parnell dia mandao ilay orinasa hiditra ao amin'ny Apple TV + ho mpanatanteraka fandaharana.
Isan'andro - iPhone tsy misy charger?
Miresaka momba ny mety tsy hampiasan'ny Apple charger ao anaty boaty amin'ny iPhone 12 manaraka isika, izay miteraka resabe.
Apple dia mandefa fanadihadiana amin'ireo mpampiasa azy momba ny fampiasan'izy ireo ny charger tafiditra ao amin'ny iPhone
Apple dia mandefa fanadihadiana amin'ny mpampiasa sasany izay mandrehitra ny tsaho momba ny mety tsy fisian'ny charger ao anaty boatin'ny iPhone manaraka
Neomorphism, fironana famolavolana vaovao izay nampiasain'i Apple tao amin'ny macOS Big Sur
Apple dia nanova ny famolavolana interface ny macOS Big Sur manaraka ny fironana farany amin'ny famolavolana: eto ny neomorphism.
Ny fahitana ny fanasan-tànana an'ny WatchOS 7 dia efa am-polony taona novolavolaina
Apple dia nandany taona maro namolavolana ny iray amin'ireo endri-javatra watchOS 7. tena lehibe indrindra.
Apple patanty rafitra famindrana rakitra optika
Apple dia nanome patanty ny rafitra famindrana rakitra optika izay mety hahomby amin'ny AirDrop izay mampiasa Wi-Fi sy Bluetooth.
New York Times dia nanambara ny fialàny tao amin'ny Apple News
Nanambara ny gazety New York Times fa manomboka anio dia hitsahatra tsy hanolotra ny atiny mivantana amin'ny alàlan'ny Apple News sy Apple News +.
Fomba fiasa momba ny rafitry ny solomaso AR an'ny Apple
Izany no mety ho endrik'ilay rafitra miasa izay azon'i Apple ampidirina ao anaty solomaso nampitomboina izay tokony hamely ny tsena amin'ny 2022
Podcast 11 × 42: traikefa amin'ny Betas
Rehefa afaka herinandro ny fizahan-toetra ny Betas of iOs, iPadOS, macOS ary watchOS dia lazainay aminao ny hevitray momba ireo fanavaozana manaraka ...
Apple Music for Android dia mahazo famerenana milamina
Apple Music kinova 3.30 ho an'ny Android dia ahafahan'ny mpampiasa mamela ny famerenana milamina amin'ny alàlan'ny fanesorana ny fahanginana eo anelanelan'ny lalana.
Apple dia mamorona rafitra fampandrenesana famerenam-bola ho an'ny mpamorona
Apple dia nanolotra rafitra fampandrenesana famerenam-bola vaovao ho an'ny mpamorona miaraka amin'ny fampahalalana hahafahan'izy ireo mandray andraikitra amin'ireo mpampiasa
Apple dia nankasitraka ny mailaka HEY Misaotra an'i Basecamp Interim Fix
Basecamp dia nanandrana nitety ireo zava-tsarotra natolotr'i Apple hanohitra ny fampiharana HEY Email ary farany, efa misy ao amin'ny App Store izy io.
Ny iPhone 12 dia mety ho nofonosina charger 20W
Ny sary tafaporitsaka dia mampiseho lozisialy 20W izay mety ho avy miaraka amin'ny iPhone 12 mba hahatonga ny fampanantenan'i Apple haingana faingana ho zava-misy isan-taona.
Hampandre anao ny iOS 14 rehefa voadidy tanteraka ny Apple Watch anao
iOS 14 dia handefa fampandrenesana amin'ny iPhone rehefa vita ny famandrihana ny Apple Watch, hisorohana ny fiandrasana tsy ilaina.
ARKit 4 dia manampy API lalina hanome hery ny scanner LiDAR
Apple dia nanolotra ireo mpamorona azy ARKit 4, ny fanavaozana ny kit ny developer ho an'ny tena zava-misy, miaraka amina asa vaovao maro.
watchOS 7: ny vaovao rehetra amin'ny antsipiriany amin'ny antsipiriany
Ny zava-baovao ao amin'ny watchOS 7 dia mifandraika amin'ny fanatsarana ny fahasalamana, ny fanampiana ny fanaraha-maso ny torimaso ary ny fampiharana Fitness vaovao.
iOS 14 dia hamela anao hanova ny rindranasa default
Miaraka amin'ny iOS 14 Apple dia hamela antsika hisafidy izay rindranasa tiantsika hampiasaina hivoahana amin'ny Internet na handefa ary handefa mailaka.
macOS Big Sur, endrika manoloana ny fanavaozana macOS tsara indrindra
Ny fanavaozana ny macOS Big Sur dia iray amin'ireo tanjaka lehibe amin'ity fanavaozana lehibe ity izay nanome lalana ireo singa mandika sy matevina.
Fahasarotana vaovao sy fahaizana mizara endrika fiambenana ao amin'ny watchOS 7
WatchOS 7 dia ahitana ny fahaizana mizara tarehy amin'ny fampiasana ny "Face Sharing" sy ny fampidirana ireo fahasarotana vaovao hampifanaraka ireo tarehy.
AirPods mahazo vaovao amin'ny alàlan'ny rindrambaiko vaovao
AirPods dia iray amin'ireo vokatra malaza indrindra Apple tato anatin'ny taona vitsivitsy, ohatra iray dia manana ...
Tongasoa eto aminay ny 'Universal Search', ny 'Spotlight' an'ny iPadOS 14
iPadOS 14 dia mitondra motera fikarohana matanjaka sy sarotra antsoina hoe "Fikarohana Universal" izay mety hitovy amin'ny Spotlight malaza avy amin'ny macOS.
iOS 14 dia mitondra fanatsarana ny sarintany ao amin'ny Apple Maps
iOS 14 dia manolotra fanatsarana ny sarintany amin'ny Apple Maps mampiditra làlana amin'ny bisikileta ary mandray fiara elektrika, ho fanatsarana ny sarintany.
Nihatsara ihany koa ny CarPlay tamin'ny iOS 14 ary hitondra CarKey
Ilay "CarKey" andrasana fatratra, ireo lakilen'ny fiara tafiditra ao amin'ny iPhone dia efa eo an-jorony….
Widgets sy baiko maro, iOS 14 dia hanavao ny efijery an-trano
Ankehitriny miaraka amin'ny iOS 14 Apple dia nanapa-kevitra ny hiala amin'ny fanirian'ireo mpampiasa manokana, mahita ny tena Widgets izahay ary baiko vaovao eo amin'ny efijery.
Sary amin'ny sary, zava-baovao iray ao anatin'ny iOS 14 vaovao
Ny zava-baovao iray hafa an'ny iOS 14 dia ny fahaizana milalao horonantsary ao ambadika rehefa mijery ny iOS, izy no "Sary an-tsary" malaza.
Ming-Chi Kuo manome toky fa ho tonga amin'ny tapany voalohany amin'ny 3 ny AirPods 2021
Ny AirPods 3 dia mety tonga tamin'ny tapany voalohany tamin'ny 2021 niaraka amina endrika vaovao araka ny vinan'ny mpandalina fanta-daza Ming-Chi Kuo.
Araho hatramin'ny minitra ny vaovao rehetra an'ny WWDC 2020
Araho ny vaovao rehetra izay ho tonga amin'ny iOS 14, iPadOS 14, macOS 10.16, tvOS 14 ary watchOS 7 ao amin'ny WWDC 2020 izay hankalazain'i Apple ao anatin'ny ora vitsivitsy.
Nangataka tamin'i Apple sy Google i New York mba hanandrana fampiharana fampiharana COVID-19 an'ny antoko fahatelo
Nangataka tamin'i Apple sy Google ny mpisolovava an'i New York mba hanongotra ny fampiharana izay manolotra ny fanarahan-dia ny coronavirus mba tsy hampikorontana ny olom-pirenena.
UK hampiasa Google sy Apple API ho an'ny fampiharana fanaraha-maso COVID-19
Ny rafitra nasionaly momba ny fahasalamana any Angletera (NHS) dia mety niova hevitra ary mampiasa Google sy Apple API hanarahana ny COVID-19.
Inona no azontsika antenaina amin'ny WWDC 2020
Efa madiva hifarana ny fanisana, ny alatsinainy amin'ny 19:00 (GMT + 2) dia hanomboka ny WWDC 2020 ary ...
Ny App Store dia tsy hanova ny fitsipiny rehefa nolavina ny fampiharana HEY Email
Nolavin'ny App Store ny fampiharana Hey Email noho ny tsy fanarahan'izy ireo ny lalàn'ny fivarotana. Na izany aza, io no mololo farany natokana ho an'ny maro.
Ny kinova 3.0 an'ny fampiharana Apple Events dia efa mampiseho ny hetsika Alatsinainy
Ny fampiharana Apple Events ao amin'ny Apple TV dia efa mampiseho ny hetsika amin'ny Alatsinainy 22nd izay nankalazan'ny Apple ny fehezanteny fanokafana WWDC
Apple dia manavao tanteraka ireo forum an'ny mpamorona
Vao avy nandefa ireo dinika mpamorona vaovao i Apple andro vitsivitsy taorian'ny nanombohan'ny telematika voalohany WWDC.
Noho izany dia azonao atao ny mandefa premiere ireo bitsika vaovao amin'ny Twitter
Twitter dia nanangana tamim-pomba ofisialy ny bitsika am-peo, fomba vaovao hizarana atiny ao amin'ny tambajotra sosialy izay ny maherifonao no feonao.
iOS 14 dia hitondra tolo-kevitra manokana sy atiny bonus ho an'ny Podcasts
iOS 14 dia afaka mitondra faritra "Ho anao" ao amin'ny fampiharana Podcasts ary koa ny fahaizana manampy votoaty fanampiny
Mampiseho ireo sary ireo fa afaka nanohy niasa tamin'ny AirPower i Apple
Miseho ny sary vaovao an'ny prototype "C68" izay mety hanondro ny AirPower izay nofoanan'i Apple tamin'ny taona 2019 ary hitantsika tsy ho ela.
Ny Amazon Echo Auto dia misy any Espana izao amin'ny vidiny 59,99 euro
Ny fidirana amin'ny fiara Amazon dia nantsoina hoe Echo Auto ary efa misy any Espana sy firenena eropeana hafa amin'izao fotoana izao amin'ny 59,99 euro ihany.
Christie Smith, lehiben'ny fahasamihafana dia nandao an'i Apple
Ny lohan'ny faritry ny fahasamihafana ao amin'ny Apple Christie Smith, dia mamela ny orinasa hanokan-tena tanteraka amin'ny fianakaviany
Apple handrakotra mivantana ny fehezanteny WWDC 2020 ao amin'ny YouTube
Apple dia mikasa ny handefa mivantana amin'ny YouTube sy amin'ireo sehatra hafa manokana ho fitenenana voalohany ny WWDC an-tserasera voalohany teo amin'ny tantara.
Podcast 11 × 40: Herinandro manomboka amin'ny WWDC 2020
Tsy ampy herinandro akory ny WWDC 2020 hitranga izay ahitantsika ny iOS 14, watchOS 6, ...
Apple dia mampiroborobo ny volavolan-dalàna mitentina 100 tapitrisa tapitrisa
Tim Cook, CEO an'ny Apple, dia nanambara ny famoronana ny Rariny ara-pirazanana sy fitsarana an-tsokosoko miaraka amin'ny vola mitentina $ 100 tapitrisa.
Alemanina dia handefa ny fampiharana ana miorina amin'ny Apple sy Google API amin'ity herinandro ity
Any Alemana dia efa manana ny zava-drehetra vonona ny handefa ny fangatahany miorina amin'ny Apple sy Google API izy ireo mba hahitana ny COVID-19 amin'ireo olona
WhatsApp dia mamela ny rafitra fandoavam-bola sy famindrana vola any amin'ny firenena sasany
Any Brezila, ny fampiharana fandefasan-kafatra dia nanomboka ny fametrahana ny serivisy fandefasana sy fandoavambola izay hanamora ny fiainana andavanandro ho an'ny mpampiasa maro.
Apple dia hanome ny AirPods miaraka amin'ny fampiroboroboana Back to School rehefa mividy Mac na iPad ianao
Tsy misy olona afaka mandà ny fiainantsika fa mihombo dizitaly, ankehitriny na ny kilasy fianarana aza dia ampianarina ...
Apple namoaka tranofiara ho an'ny sarimihetsika fanadihadiana 'Dads'
Apple dia namoaka ny tranofiara ho an'ilay horonantsary fanadihadiana vaovao, Dads, izay hivoaka amin'ny 19 Jona mankalaza ny fetin'ny ray.
Ny fivoahana farany indrindra amin'ny iPhone 12 dia misy ny bobongolo sy ny renders CAD
Ny famoahana farany mifandraika amin'ny iPhone 12 dia manamarina ny endrika izay efa noresahintsika nandritra ny volana maro mitovy amin'ny iPad Pro
Apple dia namoaka tranofiara voalohany ho an'ny 'Little Voice', andiany Apple TV + vaovao
Brittany O'Grady milalao an'i Bess King ao amin'ny 'Little Vocies', andiany Apple TV + vaovao izay havoaka amin'ny 10 Jolay.
Immuni, ilay fampiharana fisavana COVID-19 italiana, dia manomboka ny fitsapana azy any amin'ny faritra 4
Immuni no fampiharana voalohany hanarahana ny fifandraisana COVID-19 mampiasa ny Google sy Apple API. Rindrambaiko hita any amin'ny faritany italiana izy io.
Twitter dia afaka nametraka fanehoan-kevitra tao amin'ireo bitsika rehetra
Twitter dia afaka nampihatra fanehoan-kevitra niaraka tamin'ny emojis tamin'ny bitsika rehetra tao amin'ny tambajotra sosialy taorian'ny fivoahan'ny tsindry noho ny injeniera nivadika.
Ny apps podcast Castro sy Pocket Casts nesorina tao amin'ny Chinese App Store
I Apple indray dia nanondrika ny lohany ary nanatanteraka ny fangatahan'ny governemanta sinoa tamin'ny fisintomana ny fangatahana podcast roa.
Ny fitaovana fikarohana COVID-19 an'ny Apple dia mamela ny fizarana angona amin'ireo manampahefana ara-pahasalamana
Nanapa-kevitra i Apple fa afaka manapa-kevitra ny mpampiasa raha hizara amin'ny Governemanta amerikana ny angona nangonina tamin'ny alàlan'ny fitaovana fikarohana COVID-19.
11 × 39 Podcast: Nahazo zava-maniry ny WWDC
Mac vaovao miaraka amina processeur ARM, iMac vaovao ary izay rehetra fantatsika momba ny iOS 14 ao amin'ny podcast amin'ity herinandro ity, ao amin'ny iPhone News
Apple dia manentana tetikasa vaovao hanatsarana ny fitantanana teny miafina
Apple dia namorona tetik'asa open source vaovao hanandramana manatsara ny teny miafina izay tahirizin'ny mpampiasa amin'ny mpitantana.
Sonos mandefa fanavaozana ny fampiharana sy rindrambaiko vaovao
Nanapa-kevitra i Sonos fa handefa ilay rindranasa vaovao hahafahanao manavao ny fitaovanao amin'ny rafitra fiasa S2 vaovao ary manararaotra feno ireo fahaiza-manao vaovao ihany koa.
TikTok manaloka ny YouTube amin'ny mpijery ankizy
Raha ny fanadihadiana farany natao dia efa samy mampiasa TikTok sy YouTube ireo mpijery zatovo, manana seza fiandrianam-pirenena vaovao ve isika?
Amin'ny Apple Card dia azonao atao ny mividy ny fitaovanao Apple amin'ny fizarana tsy misy zanabola
Amin'ny Apple Card dia azonao atao ny mividy ny fitaovanao Apple amin'ny fizarana tsy misy zanabola. Hatramin'ny 12 volana ho an'ny lafo indrindra ary enim-bolana ho an'ny lafo indrindra.
Ny Apple Watch an'ny lehilahy Arizona dia niantso antso tany amin'ny biraon'ny polisy tamin'ny 23 aprily tamin'ny fampiasana ny detection fall.
Telegram dia mandefa ny tonian-dahatsoratry ny horonantsary vaovao sy ny vaovao hafa amin'ny endrika fanavaozana
Ny fanavaozana Telegram vaovao dia misy mpamoaka horonantsary hanovana ity atiny ity alohan'ny andefasana azy, ary koa ireo fiasa vaovao maro hafa.
Apple dia nanambara tamin'ny mpiasany ny drafitra hiverina any Apple Park aorian'ny krizy Coronavirus
Apple dia manamarika drafitra hentitra amin'ny fepetra fisorohana amin'ny aretina Coronavirus hahafahana mamerina manangana orinasa haingana araka izay tratra.
Tim Cook dia namoaka taratasy momba ny fahafatesan'i George Floyd
Taorian'ny fahafatesan'i George Floyd, ny tale jeneralin'ny Apple Tim Cook dia te-hiteny hanohitra ny fanavakavaham-bolon-koditra amin'ny taratasy misokatra.
Daily - HomeKit Secure Video manova ny zava-drehetra
Androany isika dia tsy maintsy miresaka momba ny HomeKit Secure Video, fampiasa vaovao izay anaovan'ny mpanamboatra fakan-tsary tsikelikely ...
Apple dia mampandeha ireo iPhones voaroba mandritra ny fihetsiketsehana
Apple dia mamantatra sy manakana ireo fitaovana rehetra voaroba nandritra ny korontana tany Etazonia.
Sonos handefa ny rindrambaiko S2 vaovao ho an'ireo fitaovana ireo
Sonos dia manana famoahana maro nomanina tamin'ity herinandro ity, saingy angamba ny iray amin'ireo zava-dehibe indrindra dia ny fananganana ny S2 Operating System vaovao.
iOS 13.5.5 dia milaza fa Apple dia afaka manolotra tolotra iraisana amin'ny serivisy omeny
Ao amin'ny kaody beta beta 13.5.5 dia misy ny filazana fa tsy ela dia afaka mandefa bundle miaraka amin'ireo serivisy rehetra i Apple.
Podcast 11 × 38: Ny WWDC izay miandry antsika amin'ny MACiLustrated
Amin'ity herinandro ity isika dia miresaka momba ny WWDC manaraka miaraka amin'ireo mpiara-miasa amin'ny MACiLustrated. Inona no azontsika jerena, inona no tiantsika hojerena ary inona no tsy ho hitantsika
Ny iPad Air manaraka dia afaka mandray ny seranan-tsambo USB-C
Ny taranaka iPad Air manaraka izay kasain'i Apple haparitaka eny an-tsena, dia mety hampiditra amin'ny maha-zava-baovao ny seranana USB-C fa tsy ny tselatra nentim-paharazana.
Ahoana ny fomba fisorohana ny iPhone jailbroken unc0ver tsy hanavao ny iOS 13.5.1 fotsiny
Ny mpamorona ny unc0ver dia manome antoka fa ny kinova farany an'ny fitaovana jailberak dia manana hadisoana amin'ny asany tsy fanavaozana ho azy.
Misokatra any Espana ny Apple Store amin'ny 4 Jona
Ny Apple Store voalohany any Espana dia hanomboka hisokatra amin'ny 4 Jona, manomboka amin'ny efatra izay hitarina
iOS sy iPadOS 13.5.1 manao veloma ny jailbreak miaraka amin'ny unc0ver
Ireo mpamorona jailbreak unc0ver dia nanome toky fa nofoanan'i Apple ny fitrandrahana nampiasain'izy ireo tamin'ny fitaovan'izy ireo hametrahana Cydia.
Fitaovana Diagnostika Apple USB C vaovao
Apple dia mamoaka fitaovana diagnostika seranan-tsambo USB-C vaovao ho an'ireo mpiasa manamboatra.
Isan'andro - Ny hosoka amin'ny app Flashlight sy Calculator izay mangalatra ny volanao
Ravanay ilay hosoka hitanay tamin'ny tatitra momba ny loza ateraky ny fampiharana Flashlight sy Calculator, mampalahelo fotsiny.
iOS 14 dia hanohana ireo fitaovana mitovy amin'ny iOS 13
Fivoahana vaovao iray no manome antoka fa ny fitaovana rehetra mifanaraka amin'ny iOS 13 dia azo zaraina amin'ny iOS 14, ilay kinova vaovao amin'ity taona ity.
Fivoahana bebe kokoa amin'ilay Apple Watch Skin Loop vaovao
Nanapa-kevitra ny hanavao ny hoditra Loop i Apple ary ny fivoahana farany farany dia aseho anay amin'ny horonan-tsary sy sary amin'ny antsipirihany.
Lahatsary misy fandrobana amin-kerisetra ao amin'ny magazay Apple maty Floyd
Tondraky ny horonan-tsary marobe momba ny fandrobana ny Apple Store ireo tambajotra izay manararaotra ny korontana noho ny raharaha Floyd.
Tsy hisy MicroLED ao amin'ny Apple Watch amin'ity taona ity raha ny filazan'ny mpandalina iray
Misy fivoahana sasany milaza fa tsy handray MicroLED ny Apple Watch amin'ity taona 2020 ity, dia hiandry elaela kokoa i Apple.
Apple dia mitarika ny varotra amin'ny Q1 araka ny IDC
Araka ny IDC, Apple dia nitarika ny varotra vokatra heverina ho azo ampiana mandritra ny telovolana voalohany amin'ity taona 2020 ity
Apple dia manomboka mamerina manamboatra ireo fivarotana Apple ara-batana azy
Apple dia nanokatra mihoatra ny 50% ny magazay ara-batana manerantany miaraka amin'ny protokolola vaovao ho an'ny fiarovana, ny fahadiovana ary ny fepetra fanalavirana ny fiaraha-monina.
Inductiv no fanombohana ambiny ambin'ny folo novidian'i Apple
Apple mividy Inductiv fanombohana hanatsarana ny fahaizan'ny mianatra milina an'ny Siri virtoaly mpanampy.
11 × 37 Podcast: Jailbreak indray… Misy miraharaha ve?
Niresaka momba ny Jailbreak vaovao ho an'ny iOS 13.5 sy vaovao hafa amin'ny herinandro mifandraika amin'ny haitao sy ny tontolon'ny Apple isika.
Samsung sy LG dia hizara ny fanamboarana ny efijery OLED amin'ny iPhone manaraka
Taorian'ny fivarotana an-tsambo ho mpamatsy LG amin'ny faran'ny taona 2019, ny fampisehoana OLED ho an'ny iPhone ho avy dia antenaina fa avy amin'ny Samsung sy LG.
Apple mividy ny zon'ny 'Los Fraguel' hanombohana famerenana amin'ny laoniny
Tonga tao amin'ny Apple TV + i Los Fraguels noho ny fahalianan'ny Apple hamerina ilay andiany. Ho fanampin'izay, aorian'ny fividianana ny zony dia afaka mahita ny toko rehetra ao aminy isika.
Suisse no firenena voalohany nandefa ny rindranasa fanarahana azy mifototra amin'ny Apple sy Google API
Any Suisse, ny manampahefana sy ny sampandraharaha vonjy taitra dia mandefa fampiharana miorina amin'ny Apple API sy Google API tanteraka
Ity hevitra kanto ity dia mampiseho Apple Watch Series 6 tsy misy rafitra
Ny fahatongavan'ny Apple Watch Series 6 dia andrasana amin'ny tapany faharoa amin'ny taona 2020. Mpampiasa maro no manomboka manao ny hevitr'izy ireo momba ny hoe hanao ahoana izany.
Ny iPhone 12 vaovao dia hanohy hanana seranan-jiro, ny iPhone tsy misy seranana dia ho tonga amin'ny 2021
Ireo tsaho vaovao dia milaza fa hanohy hanana iPhones vaovao misy seranan-jiro mandritra ny taona 2020 isika, ary amin'ny 2021 dia afaka mahita iPhones tsy misy seranana isika.
Fivarotana Apple roa no misokatra any Japon amin'ity herinandro ity
Fivarotana Apple roa no misokatra eto Japon amin'ity herinandro ity. Ireo any Fukuoka sy Nagoya Saka dia misokatra indray amin'ny faha-27 amin'ity volana ity. Tsy fantatra amin'ny daty japoney sisa ny daty.
Apple Ads dia mahazo loka 25 amin'ny loka ADC isan-taona faha-99
Apple no nibata ny fifaninanana loka Art Director Club farany izay nahazoany loka 25 tamin'ny sokajy samihafa, anisan'izany ny loka lehibe
Ny macOS vaovao dia mety hitondra rindranasa Messages mifototra amin'ny Catalyst
Apple dia mieritreritra ny hanavao ny app Messages ho an'ny Mac hahafahany mampifanaraka azy amin'ny fotoana vaovao mifototra amin'ny tetikasa Catalyst.
Ny taranaka AirPods manaraka dia mety ahitana sensor sensor ambient
Ny tsaho farany mifandraika amin'ny AirPods dia manome soso-kevitra fa mety misy sensor sensor ambient ho an'ny tanjona ara-pitsaboana
Ny vondrom-piarahamonina Jailbreak dia manohy miloka matanjaka ary nandefa ny Jailbreak ho an'ny iOS 13.5, holazainay aminao ny vaovao rehetra, mbola manao ny Jailbreak ve ianao?
Ireo hackers sy media dia manana kinova iOS 14 nangalarina nandritra ny volana maro
Fantatra fa misy ny kinova iOS 14 mivezivezy amin'ny tambajotra avy amin'ny fangalarana iPhone 11 miaraka amin'ny tombotsoan'ny injeniera.
Apple dia te-hampiroborobo ny atiny podcast tany am-potony
Ny hevitr'i Apple hanatsarana ny serivisy horonantsary mivantana dia ny famoronana votoaty voalohany ho an'ny Apple Podcast izay mety hahatratra ny efijery kely
11 × 36 Podcast: Apple Glass, COVID-19 ary maro hafa
Manadihady ny tsaho sy ny fivoahana rehetra momba ny Apple Glass izahay, ary koa ny vaovao momba ny fanavaozana ny iOS 13.5 sy ny fampiharana manohitra ny COVID-19 any Espana.
Ny Apple Glasses dia ho avy miaraka amina fanontana manokana ho fanomezam-boninahitra an'i Steve Jobs
Apple dia mety miasa amin'ny famoahana ny Apple Glasses ho fanomezam-boninahitra ny solomaso solomaso an'ny Steve CEO efa tara ary taloha.
Ilay 5G azonao dia mety tsy ho haingana araka ny noeritreretinao azy
Ny 5G dia amidy ho toy ny quintessence, tsy an'ny telefaona finday intsony, fa ny fifandraisan-davitra amin'ny ...
WhatsApp dia manohana ny fifandraisana QR (amin'ny beta)
Ny fahafaha-mampiditra fifandraisana amin'ny alàlan'ny QR dia tonga amin'ny WhatsApp na dia amin'izao fotoana izao aza dia ao anatin'ny dingana beta fotsiny.
Ny campus Apple vaovao any Austin dia hanana trano fandraisam-bahiny misy efitrano 192
Ilay campus izay naorin'i Apple any Austin, Texas, dia hanana trano fandraisam-bahiny ahitana efitrano 192 ho an'ny mpiasan'ilay orinasa.
Ny Twitter dia mamela ny mpampiasa hanapa-kevitra hoe iza no mamaly ny bitsika
Twitter dia nanakodia endrika iray ho an'ny vondrona mpampiasa voafantina. Ity fampiasa ity dia ahafahanao mametra izay afaka mamaly ny bitsika avy amin'ny mpampiasa iray.
Ireo no loko vaovao an'ny Powerbeats Pro
Ny loko vaovao an'ny Powerbeats Pro dia voasivana tanteraka, izay manambara ny fahatongavan'ireo headphone vaovao amin'ny katalaogin'i Apple.
Hajanon'i Apple ny fampidirana headphone ao anaty boaty iPhone
Araka ny vaovao farany avy amin'ny mpandalina, ny Appel dia hampitsahatra ny fampidirana ireo EarPods ao amin'ny boaty iPhone 12 sy amin'ny kinova ho avy.
Apple Glass, lazainay aminao ny fampahalalana rehetra tafaporitsaka
Ity no fampahalalana mivoaka rehetra momba an'i Apple Glass, ny solomaso Augmented Reality avy amin'ny orinasa Cupertino.
Io no mety ho endrik'ilay iPad Air vaovao araka ny fiheverana futuristic
Ny hevitra iray dia mampiseho izay mety fanavaozana ny iPad Air izay antenaina hanomboka amin'ny tapany faharoa amin'ny taona miaraka amin'ny 10.8 santimetatra.
Navoaka ho an'ny iOS 14 ny sary kaody QR
Misy horonantsary vaovao mampiseho amintsika ny mampiavaka ny fampiharana Augmented Reality "Gobi" izay kasain'ny Apple alefa miaraka amin'ny iOS 14.
Nilaza ny mpamorona andiana mpiaro an'i Jacob fa nieritreritra ny hanao sarimihetsika izy tamin'ny voalohany
Ny fiarovana ny mpiambina an'i Jacob dia nanambara fa nikasa ny hanao sarimihetsika miorina amin'ity boky ity izy tamin'ny voalohany.
TSMC dia tsy hamokatra processeur ho an'ny Huawei
Ny ady varotra teo amin'i Etazonia sy i Shina dia velona indray miaraka amin'ny vaovao tsy voamarina momba ny TSMC sy ny tsy famokarana processeur ho an'i Huawei
Ny Pride Spheres vaovao dia hita ao amin'ny watchOS 5 beta 6.2.5
Apple dia namoaka ny mpamorona beta 5 an'ny watchOS 6.2.5 nanampy ny diarin'ny Pride 2020 niaraka tamin'ny loko pastel hita maso kokoa.
Mividy GIPHY i Facebook mba hampidirina ao amin'ny Instagram indrindra
Nanambara ny fividianana tahiry GIF fantatra amin'ny anarana hoe GIPHY amin'ny $ 400 tapitrisa i Facebook ary hiditra amin'ny ekipa Instagram.
Foxconn dia miaina ny tombony ambany indrindra tao anatin'ny roapolo taona lasa
Tsy mahagaga raha nahavoa tena ratsy tamin'ny coronavirus ny coronavirus.
TSMC dia manamafy ny ozinina mpanodina azy ao Arizona
Nohamafisina tamin'ny fomba ofisialy ny fananganana orinasa chip TSMC any Arizona, Etazonia.
Apple mividy NextVR hanamafisana ny drafitra zava-misy virtoaly
Apple dia manidy 100 tapitrisa ny fividianana NextVR, orinasa iray miandraikitra ny fandefasana hetsika isan-karazany amin'ny zava-misy virtoaly.
Kuo: iPad 10,8-inch (2020), iPad mini 9-inch (2021), ary Apple Glasses (2022)
Kuo: iPad 10,8-inch (2020), iPad kely 9-inch (2021) ary Apple Glasses (2022). Ireo no faminaniana nataon'i Kuo amin'ireo fitaovana telo rehetra.
Ireo mpampiasa Magic Keyboard dia mitaraina momba ny fandatsahan'ny bateria
Ny sasany mpampiasa ny Magic Keyboard vaovao dia manao fitarainana momba ny fanjifana bateria.
Mahita ny Coronavirus ve ny Apple Watch?
Araka ny fanadihadiana sasany, ny Apple Watch dia mety ho afaka mamantatra ny Coronavirus.
Manomboka mivarotra ny router Wi-Fi eero mesh ao amin'ny Apple Store i Apple
Apple dia manomboka mivarotra amin'ny alàlan'ny Apple Store ny karazana eero Mesh Wifi Routers, ny vahaolana tsara indrindra hamahana ny olan'ny Wifi ao an-trano.
Apple dia manakarama an'i Ridley Scott hampitombo ny katalaogin'ny Apple TV +
Ilay mpamorona doka '1984' an'i Apple, Ridley Scott, dia niverina tany amin'ny Big Apple mba hiteraka fandaharana amin'ny fahitalavitra vaovao sy andiany ho an'ny Apple TV +.
Isan'andro - nanapa-kevitra tamin'ny MacBook Air aho fa tsy MacBook Pro?
Tao amin'ny Podcast Daily androany dia nanazava izy ny antony nisafidianako MacBook Air nohatsaraina kely kokoa tamin'ny MacBook Pro fototra.
Afaka nampiasa ny fakantsarin'ny iPhone 11 Pro i Apple mba handefasana ny WWDC 2020 manaraka
Apple dia afaka sahy nampiasa ny fakantsarin'ny iPhone 11 Pro handefasana ireo fivoriana manaraka an'ny WWDC 2020 miaraka amin'ny kalitaon'ny Broadcast.
Tsy ho ela dia hiverina any amin'ny birao ny mpiasan'ny Apple
Ny fiverenana any amin'ny biraon'ny mpiasan'ny Apple dia mety hitranga mandritra ny volana manaraka sy Jolay araka ny vaovao farany
Apple manavao ny AirPods V2 amin'ny firmware vaovao
Ny orinasa Cupertino dia namoaka fanavaozana ny firmware izay misy fiatraikany amin'ny andiany faharoa amin'ny AirPods.
Podcast 11 × 35: Tsaho momba ny iPhone 12 sy AirPods Studio
Izahay dia mamakafaka ireo tsaho farany momba ny iPhone 12 manaraka, izay azo saika navoakan'ny saika rehetra
Manampy fitaovana fikarohana vaovao diso ny Twitter
Twitter dia nanolotra marika fampitandremana vaovao momba ny fampahalalana diso amin'ny fotoanan'ny vaovao diso mifandraika amin'ny COVID-19.
Apple hampiasa vola 300 tapitrisa hanamboarana fampisehoana mini-LED sy micro-LED any Taiwan
Ny lehilahy Cupertino dia hanao fampiasam-bola 300 tapitrisa any Taiwan, miaraka amin'ireo mpanamboatra hafa, hamoronana efijery mini-LED sy micro-LED
Miresaka momba ny fitehirizana sy ny RAM an'ny iPhone 12 Pro izahay, izay toa hanomboka amin'ny 128GB ho an'ny maodely rehetra ary hahatratra 6GB RAM amin'ny maodelim-"Pro".
NFC dia mankasitraka ny Protokolan'ny famandrihana Wireless Wireless vaovao
NFC dia nanolotra WLC, ny protoloco famandrihana Wireless tsy misy tariby vaovao, izay ahafahana mameno fitaovana kely mampiasa fitaovana ampiasana NFC.
iOS 13.5 beta 4 dia mitondra fanavaozana ny fikirakirana ho an'ny mpampiasa ny fampandrenesana ho an'ny COVID-19.
Ahoana ny fomba fampiharana izay te hampiasaina hanarahana ny fifandraisana amin'ireo mety voan'ny COVID-19 sy ny fanontaniany momba ny asan'ny tsiambaratelo.
Mamaly amin'ny vokatra marobe i Microsoft
Surface Go 2, Surface Book 3 ary Surface Headphones 2 vaovao, ireo vokatra vaovaon'i Microsoft hifaninana amin'ny iPad Pro sy ny MacBook amin'izao fotoana izao.
Ny Fanjakana Royaume-Uni dia hanitsy ny fampiharana Covid-19 azy manokana
Toa mieritreritra ny fampiasana ny fampiharana azy manokana hanarahana ny tranga Covid-19 ao amin'ny Fanjakana Angletera
Mino ny CEO an'ny Spotify fa hanokatra tsikelikely ireo sehatra i Apple
Daniel Ek, ny tale jeneralin'ny Spotify, dia manome toky fa mandeha amin'ny làlana tsara i Apple mba hahatratrarana tontolo iainana malalaka sy madio, na dia misy aza ny asa tokony hatao.
11 × 34 Podcast: Vaovao MacBook Pro, WWDC 2020 ary maro hafa
WWDC 2020 Manomboka Amin'ny 22 Jona, Plus Miresaka momba ilay MacBook Pro 13-Inch Vaovao Navoaka tamin'ity herinandro ity isika sy ny vaovao hafa
PayPal dia mamela ny fandoavam-bola amin'ny kaody QR ho an'ny orinasa kely
Ny fepetra raisinay tsy tapaka mba hampihenana ny fiantraikan'ny COVID-19 amin'ny mponina dia tongasoa avokoa….
WWDC 22 manomboka amin'ny 2020 Jona
Apple dia manao ofisialy ny daty hanombohan'ny WWDC 2020: 22 Jona. Androany isika dia hahita ny vaovaon'ny iOS 14 sy ny sisa amin'ireo sehatra.
Toy izao no fampiharana izay hampandre anao ny fisehon'ny COVID-19
Apple dia mampiseho amintsika ny mety ho fisian'ny fampiharana amin'ny fanarahana ny fifandraisana amin'ny COVID-19 sy ny antsipiriany misimisy momba ny fiasany.
Microsoft manokatra ny multi-varavarankely amin'ny fomba beta amin'ny iPadOS ho an'ny Word sy Powerpoint
Herintaona taty aoriana dia manomboka beta amin'ny endri-javatra misy varavarankely maro an'ny iPadOS 13 i Microsoft ao amin'ny rindrambaiko Microsoft Word sy Powerpoint ao amin'ny App Store.
Apple News dia mahatratra mpampiasa 125 tapitrisa isam-bolana
Apple dia nanambara tamin'ny dek tamin'ny taon-dasa ny fanombohana ny Apple News +, ny serivisy famandrihana magazine izay nameno ...
Ny Apple Watch dia mamantatra ny ischemia coronary izay tsy hitan'izy ireo tany amin'ny hopitaly
Ny Apple Watch dia mahita ny angina amin'ny vehivavy 80 taona izay tsy afaka namantatra ny aretina tany amin'ny hopitaly rehefa nanjavona
Ny fidiram-bolan'ny Apple dia mitombo hatrany amin'ny telovolana
Tim Cook dia nanambara ny valim-bola ho an'ny telovolana faharoa amin'ity taona ity izay manasongadina ny firaketana an'i Apple amin'ny varotra sy serivisy.
Apple dia nandefa ampinga fito tapitrisa sy sasany ho an'ny trano fidiovana manerantany
Ny zazalahin'i Cupertino, tamin'ny fiezahana nanampy hamongorana ny valanaretina Coronavirus, dia mety handefa ampinga 7.5 tapitrisa ho an'ny trano fidiovana.
Ny iOS 13.5 beta dia manamora ny fandavana ny Face ID rehefa manao sarontava
Ny iOS 13.5 beta dia ahitana ny fahaizana miditra haingana amin'ny kaody manokatra raha hitan'ny Face ID fa manao sarontava ianao.
Tsy misy viriosy afaka miaraka amin'ny mpampiasa Spotify, 130M
Vao tsy ela akory izay ny orinasa dia nahatratra ny mpampiasa 150 tapitrisa mandoa vola.Hanao izay hahasoa azy indray mandeha ve izy ireo?
NeuralCam dia mitondra ny "Mode Night" amin'ny iPhone SE
Araka ny fantatrao tsara, ny iPhone SE dia tsy manana an'io fahaiza-manao io, na izany aza NeuralCam dia efa nohavaozina mba tsy hanana zavatra tsy ampy ianao.
Mihatsara i Siri amin'ny feo voajanahary kokoa amin'ny teny alemà
Akory ny hagagan'ny maro, ary taorian'ny fanambaràn'ny iOS 11 dia manavao ny feon'i Siri amin'ny teny alemanina i Apple ka mahatonga azy io ho betsaka kokoa sy voajanahary.
Apple Maps dia mampiseho ireo toerana anaovany fitsapana ny COVID-19 any Etazonia
Apple dia nanampy ny fahitana hoe hopitaly, tobim-pitsaboana na ivon-toerana any Etazonia sy Puerto Rico no manao fitsapana fitiliana COVID-19 amin'ny Apple Maps.
11 × 33 Podcast: Mac voalohany miaraka amin'ny ARM amin'ny 2021
Toa efa hohamarinina ny tsaho sy ny fivoahana am-polony taona maro miaraka amin'ny fanombohan'ny Mac voalohany miaraka amin'ny ...
Fampiharana manohitra ny COVID-19 sy ny olana amin'ny bateria
Any Aostralia, ny famahana ny fifanolanana amin'ny COVID-19 sy ny baterian'ny mpampiasa dia efa navotsotra.
Antso an-tsary misy olona hatramin'ny 8 ao amin'ny WhatsApp misy ankehitriny
Ny antso an-tsary sy ny antso hatramin'ny 8 ny olona ao amin'ny WhatsApp dia efa zava-misy taorian'ny nahazoana ny fanavaozana ora vitsy lasa izay.
Ny tsaho dia manondro ny iPhone 5G miaraka amina sensor sensor an'ny ultrasonika
Ny loharanom-baovao sasany dia milaza fa ny iPhone 5G 2020 dia mety hanana sensor amin'ny fantsom-pandrefesana ultrasonika eo ambanin'ny efijery amin'ny iray amin'ireo maodely avo lenta.
Tsaho vaovao momba ny fanavaozana ny AirPods
Hisy ny fanatsarana ny AirPods sy AirPods Pro, fa ny AirPods Lite dia nofinofy fotsiny izao.
Apple sy Google dia manome antsipiriany bebe kokoa momba ny rafitra fanarahan-dry zareo manohitra ny COVID-19
Apple sy Google manome antsika antsipiriany bebe kokoa momba ny fomba fiasan'ny rafitra fanarahan-dry zareo hanampiana amin'ny ady amin'ny COVID amin'ny fifantohana amin'ny fiainana manokana.
Telegram handefa antso an-tsary azo antoka alohan'ny faran'ny taona
Telegram dia nanambara ny fahatongavan'ireo mpampiasa mavitrika 400 tapitrisa ary koa ny fanombohana antso an-tsary azo antoka ao amin'ilay fampiharana amin'ity taona 2020 ity.
Misy hafatra vaovao afaka manakana ny iPhone na iPad anao raha toa ka tonga fampandrenesana izy
Baomba an-tsoratra vaovao avy amina mpilalao amin'ny fiteny Sindhi no mahavita manakana ny iPhone sy iPad na dia misy ny iOS farany navoakany aza.
Faharefoana roa vaovao hita tao amin'ny fampiharana iOS Mail
Orinasa mpiambina iray no nanambara ny fahalemena roa ao amin'ny mailaka Mail amin'ny iOS sy iPadOS izay ahafahana miasa ny script raha tsy mahazo alalana avy amin'ny mpampiasa.
Ny Apple-Google Contacts API dia hiasa amin'ny 28 aprily
Podcast 11 × 32: iPhone SE sy Magic Keyboard, ny faran'ny roa an'ny Apple
Nodinihinay ireo famoahana vaovao avy amin'ny Apple, ny iPhone SE vaovao sy ny Magic Keyboard, iPhone mora vidy ary kitendry lafo vidy tokoa.
Ny iPhone 11 no lafo indrindra any Etazonia hatreto amin'ity taona ity
Izany no antony tsy mahagaga raha mandritra ny telovolana voalohany amin'ny taona 2020 ny iPhone 11 dia manohy manjaka ny varotra any Etazonia miaraka amin'ny totohondry vy mandraka amin'ity taona ity.